2. Qaab dhismeedka Liraglutide
3. Calaamadda Liraglutide
4. Qaabka Liraglutide ee waxqabadka
5. Tilmaamaha daawada iyo Maamulka ee Liraglutide
6. Waa maxay faa'iidooyinka Liraglutide?
7. Waa inaad taxaddar u yeeshaa dhibaatooyinka soo socda / digniinta markaad isticmaaleyso Liraglutide
8. Is-dhexgalka Liraglutide
9. Khibrad Caafimaad
Liraglutide (204656-20-2) waa daawo lagu iibiyay magacyo kala duwan oo magacyo leh meelo kala duwan oo dunida ah, kuwaas oo loo isticmaalo ujeedo daaweyn kala duwan. Magacyada ugu caansan magacyada Liraglutide ee suuqa maanta waa Victoza iyo Saxenda. Isticmaalka Liraglutide wuxuu kuxiran yahay nooca aad iibsato, tusaale ahaan, Victoza waxaa badanaa loo adeegsadaa jimicsi habboon iyo cunno si kor loogu qaado kontoroolka sonkorta dhiigga ee dadka waaweyn iyo nooca 2 mellitus diabetes ee carruurta ugu yaraan toban sano jir ah. Intaa waxaa sii dheer, Victoza wuxuu sidoo kale cadeeyay inuu muhiim u yahay yareynta halista dhibaatooyinka wadnaha sida istaroogga ama wadne istaaga dadka waaweyn ee qaba cudurada wadnaha iyo nooca sonkorowga 2.
Dhanka kale, Saxenda, oo sidoo kale ah sumad Liraglutide kale, ayaa loo isticmaalaa cunno habboon iyo jimicsi si looga caawiyo isticmaalayaasha inay lumiyaan miisaan marka ay la daalaa dhacayaan xaalado caafimaad oo kala duwan. In kasta oo ay ahayd astaan ​​sumadeed Liraglutide, Saxenda looma isticmaalin daaweynta nooca 1 ama nooca sonkorowga labadaba, sidoo kale ma ahan xakamaynta rabitaanka cuntada ama kordhinta miisaan lumiska. Dhakhtarkaaga ayaa waliba ku talin kara Liraglutide ayaa adeegsata sababaha kale ee aan lagu soo darin hagahan. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaad had iyo jeer ka hesho daawada saxda ah ee Liraglutide dhakhtarkaaga si aad u hesho natiijooyin wanaagsan.
Liraglutide iibinta waxaa laga heli karaa dukaamada internetka ee kala duwan iyo farmasiiyada jirka, laakiin waa inaad had iyo jeer ka taxadartaa ishaada. Had iyo jeer samee daraasad sax ah si aad u hubiso inaad ka hesho dawadaada iibiyayaal la isku halleyn karo oo khibrad leh. Tayada daawada aad qaadatid waxay saameyn ku leedahay natiijooyinka aad la kulmi doonto dhamaadka wareegga qiyaasta daawada. Qiimaha Liraglutide wuxuu ku kala duwanaan karaa il ilaa mid kale laakiin hubso inaad hesho tayada ugu fiican. Haddii aadan hubin meesha ay ku taal, kala tasho daawadaada.
Farsamo ahaan, Qaab dhismeedka Liraglutide wuxuu ka kooban yahay gulukoos glucagon-sida-dufan-muddo dheer shaqeyneysa oo loo maamulo subcutaneously iyo waxqabadka antihyperglycemic. Tallaabada daawada ee muddada dheer waa natiijada ka dhalata dufanka dufanka leh, iyo ku dhejinta palmitic acid ku dhejinta GLP-1, oo si fudud ugu xirmo albumin. Xaraashka albumin wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta Liraglutide xaalufka degdegga ah isla marka aad qaadatid qaddarkaaga, iyo natiijada, waxay kuu horseedaa sii deyn joogto ah oo gaabis ah GLP-1. Tani waxay xaqiijineysaa inaad ku hesho natiijooyinka aad rabto waqtiga ugu gaaban ee suurtagalka ah.
FDA waxay oggolaatay Victoza iyo Saxenda labadaba daaweynta daweynta xaaladaha caafimaad ee kala duwan ee dalka Mareykanka. Sida hore loo sheegay, Victoza waxaa loo oggolaaday daaweynta dhibaatooyinka dhibaatooyinka wadnaha iyo nooca sonkorowga 2. Waxaa sidoo kale caan ku ah yareynta calaamadaha caloosha sida matag, lallabo, iyo shuban. Saxenda waxaa sidoo kale ogolaatay FDA inay ka caawiso daaweynta buurnaanta iyo xakameynta miisaanka jirka. Liraglutide waa in la qaataa markaad rabto inaad yareyso dhibaatooyinka wadnaha iyo xiddidada taasoo ka dhalata cudurrada wadnaha ama nooca 2 diabetes mellitus. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad xakameyso miisaanka jirkaaga oo ka yimaada nooca 2 diabetes mellitus, buurnaanta Liraglutide waxay kuu noqon doontaa daawo fiican. Cayilka Liraglutide waxay sidoo kale ka caawisay adeegsadayaal badan inay maareeyaan miisaankooda. Xitaa haddii aad la kulanto astaamaha lagu daaweyn karo budada Liraglutide, ha qaadan dawada adigoon la tashan xirfadle caafimaad. Si kastaba ha noqotee, xusuusnow in dhakhtarkaagu sidoo kale kuu qori karo dawadan si aad uga caawiso daweynta xaalad kasta oo caafimaad oo kale oo aan lagu xusin qodobkaan.
Xaaladaha badan, Liraglutide waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad ku guuleysato dhamaadka wareegga qiyaasta daawada. Tusaale ahaan, habka Liraglutide ee ficil loogu talagalay dadka qaadanaya xaddiga liraglutide ee miisaan luminta ayaa ka duwan kuwa isticmaala ee u qaadanaya daaweynta nooca 2 diabetes mellitus. Labada magac ee Liraglutide magacyadooda Victoza iyo Saxenda u shaqee si ka duwan marka ay galaan nidaamkaaga jirka.
Tusaale ahaan, cayilka Liraglutide (Saxenda) wuxuu ku shaqeeyaa xakameynta wax soo saarka hormoonnada cunnada (glucagon-like-peptide ama GLP-1) ee jirkaaga, kaas oo nidaamiya gaajadaada. Waqti xaadirka wax soo saarka GLP-1 uu hoos u dhaco, rabitaankaaga cuntada ayaa hoos u dhici doona oo ku dhammaan doona cunitaanka kaloriin yar, iyo muddada dheer, luminta jirkaaga. Kalooriyeyaasha ayaa mas'uul ka ah culeyskaaga jirka oo kordha, iyo haddii aad xakameyn kartid, markaa way kuu fududaan doontaa inaad daadiso xoogaa rodol ah.
Dhanka kale, Victoza waxay u shaqeysaa seddex qaab oo kaladuwan si ay u bixiso natiijooyinka uu ballanqaaday soo-saaraha daroogada. Marka hore, Victoza wuxuu u shaqeeyaa isagoo hoos u dhigaya cuntada ka tagaysa calooshaada, taas oo nidaamisa heerarka sonkorta dhiigga ee jirkaaga. In kasta oo isla habkaas loo isticmaalo, haddana dawadu waxay sidoo kale ka hortagaysaa in beerkaagu soo saaro sonkor aad u badan. Ugu dambeyntiina, Liraglutide, oo ah qeybta ugu weyn ee Victoza, waxay sidoo kale kicisaa xameetidaada si ay u soo saarto insulin badan marka heerarka sonkorta dhiigga ay sarreeyaan. Daawadu waxay kor u qaadeysaa howlahaas oo dhan iyadoo kor loogu qaadayo waxtarka unugyada beta. Unugyadu waxay gacan ka geystaan ​​xakameynta sonkorta dhiigga iyagoo sii daaya insulin, taas oo baabi'isa heerarka sonkorta ee nidaamka jirkaaga. Kicinta wax soo saarka insulin ee jirkaaga ayaa ah sababta ugu weyn ee Victoza loogu isticmaalay daaweynta nooca sonkorowga 2 mellitus.
5. Tilmaamaha Qiyaasta iyo Maamulka ee Liraglutide
Liraglutide ayaa adeegsata Waxay ku kala duwan yihiin hal adeegsade mid kale iyadoo ku xiran xaaladda caafimaad ee la daweynayo. Qiyaasta dawada waa inuu dejiyaa xirfadle caafimaad iyadoo kuxiran xaalada la daweynayo. Carruurta da'doodu ka yar tahay toban sano laguma talinayo inay qaataan dawadan, maaddaama ay u horseedi karto waxyeelo daran. Jidhka bini’aadamka sidoo kale way kala duwan yihiin, waana sababtaas awgeed markasta waxaa lagugula talinayaa inaad tagto baaris caafimaad kahor intaadan bilaabin qaadashada daroogo. In kasta oo Liraglutide uu la yimaado tilmaamaha qiyaasta daawada ee soo-saaraha soo jeediyo, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan adiga kuu shaqeyn. Dhakhtarka ayaa ah qofka kaliya ee saxda ah ee kuu dejin kara qiyaasta Liraglutide ee saxda ah ka dib markuu baaray xaaladaada caafimaad.
Liraglutide waa dawo la isku duro oo lagu durayo gacantaada kore, caloosha, ama bowdada. Ma jiro waqti cayiman oo aad ku qaadan karto qaddarkaaga Liraglutide, laakiin waxaad ku qaadan kartaa cuntada ama aadan cunaynin. Had iyo jeer waad wareegi kartaa goobaha duritaanka ee liraglutide si aad u dhinto waxyeelada ama xannuunada laga yaabo inaad ku aragto aagga. Waqtiga maareynta qiyaasta ayaa si sahal ah loogu beddeli karaa iyada oo aan la hagaajin qiyaasta daawada. Had iyo jeer waxaa haboon in markasta la baaro Cirbadaha Liraglutide aragti ahaan; waa inaad qaadataa mudistaada markii uu xalkaagu midab yahay, cad yahay, oo aan lahayn wax muuqan ah. Haddii ay dhacdo in xalkaagu uu yeesho midab aan caadi ahayn, ha qaadanin adiga oo aan la tashan dhakhtarkaaga.
Qiyaasta budada Liraglutide waxay ku xirnaan doontaa u dulqaadashada jirkaaga, da'da iyo xaalada caafimaad ee lagu daaweynayo.
hore The Budada Liraglutide (204656-20-2) dadka waaweyn waa 0.6mg, oo ay tahay in la qaato hal mar maalintii hal toddobaad. Hal usbuuc kadib, qiyaasta waxaa lagu hagaajin karaa 1.2mg subcutaneously hal mar maalintii, iyo hadaadanad ka gaarin xakamaynta cudurka, dhaqtarkaaga wuxuu kordhin karaa qiyaasta dheeriga ah ilaa 1.8mg maalinti. Qiyaasta dayactirka ee Liraglutide waa inuu ahaadaa inta udhaxeysa 1.2 iyo 1.8 mg maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta ugu badan waa 1.8mg maalin kasta.
Qiyaasta bilowga ah ee '0.6mg' maalin kasta waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo astaamaha caloosha iyo mindhicirka ee ka dhashay bilowga daaweynta mana ku filnaan karto ku filan xakameynta glycemic. Si kastaba ha noqotee, Liraglutide ma aha beddellada insulin-ka oo bukaannada qaba nooca 1 diabetes mellitus ama sonkorowga ketoacidosis ma aha inay qaataan. Markaad bilowdo dawadan, ka fikir inaad yareyso qarsoodiga insulinta si loo yareeyo halista hypoglycemia.
Yaraynta halista wadnaha iyo xididada
Qiyaasta bilowga ah ee Liraglutide ee loogu talagalay dadka waaweyn ee leh dhibaatooyinka wadnaha waa 0.6mg maalin kasta waana in la qaataa usbuuca ugu horreeya. Qiyaasta waa in lagu kordhiyaa 1.2mg maalin kasta usbuuca soo socda, iyo haddii aad ku guuleysato xakameynta glycemic, takhtarkaagu waa inuu ku kordhiyaa qiyaasta daawada illaa 1.8mg maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, waqtiga uu Liraglutide budada qiyaasta ayaa la kordhiyaa ilaa inta ugu badan, waxaad heli doontaa natiijooyinka aad rabto. Qiyaasta dayactirku waa inay noqotaa inta u dhaxaysa 1.2mg iyo 1.8mg maalin kasta, halka qiyaasta ugu badan ee dadka waawayn ay tahay 1.8mg maalin kasta.
Qiyaasta Liraglutide ee dadka waaweyn culeyska ama cayilka
The culeyska liraglutide kordhinta qiyaasta waa in loo hoggaansamo, si loo yareeyo suurtagalnimada in lagu arko astaamaha caloosha. Hagaajinta qiyaasta daawada ayaa dib loo dhigi karaa toddobaad dheeraad ah si natiijooyin wanaagsan loo helo. Si kastaba ha noqotee, dhakhtarkaagu waa inuu kugu haggaa hanaankan. Qiyaasta bilowga ah ee halkan waa 0.6, oo ay tahay in si hoosaad ah loo qaato hal mar maalintii. Toddobaadka labaad, qiyaasta waxaa lagu kordhin karaa 1.2mg maalin kasta; usbuuca saddexaad, qiyaasta ayaa kor loogu qaadi karaa ilaa 1.8 maalin kasta. Toddobaadka afraad, qiyaasta sidoo kale waa in loo kordhiyaa 2.4mg iyo usbuuca shanaad ilaa 3mg hal jeer maalintii. Si kastaba ha noqotee, dhakhtarkaaga ayaa kugu hagi doona goorta iyo sida loo hagaajiyo qiyaasta daawada.
Xaddiga dayactirka ee halkan waa 3mg hal jeer maalintii, laakiin haddii ay dhacdo in jidhkaagu uusan u dulqaadan karin, takhtarku wuxuu kugula talin karaa inaad joojiso qiyaasta. Maareynta culeyska joogtada ah ee la isticmaalayo daroogadaan waxaa lagu gaarey oo keliya qaddar aad u sarreeya. Cayilka buurnida, astaanta Saxenda Liraglutide waxay cadeysay inay muhiim utahay maareynta miisaanka, dawada looma adeegsan daaweynta daweynta nooca sonkorowga 2 mellitus. Si kastaba ha noqotee, Victoza waxaa caan ku ah daaweynta nooca 2 diabetes mellitus iyo dhibaatooyinka wadnaha.
Qiyaasta dawada duritaanka Liraglutide waa in ay qaataan oo keliya carruurta ugu yaraan toban sano jir iyo wixii ka sareeya. Cunug kasta oo ka yar taas waa inaan la siin dawadan xitaa haddii ay muujiyaan astaamo lagu daaweyn karo peptide-kaan. Qiyaasta daawada liraglutide ee carruurta ayaa waliba kuxiran xaaladda caafimaad ee la daweynayo. Qiyaasta lagu taliyey waa sida soo socota;
Qiyaasta carruurta ee loogu talagalay nooca Sonkorowga 2
Talada bilowga ah ee lagu talinayo qiyaasta Liraglutide waa 0.6mg, oo ay tahay in la qaato hal mar maalintii ugu yaraan hal todobaad. Taas ka dib, qiyaasta waxaa loo kordhin karaa 1.2mg maalin kasta, iyo haddii kontoroolka glycemic aan la gaarin, daawada ayaa kordhin karta qiyaasta si dheeraad ah ilaa 1.8 gm usbuuca soo socda. Cabbirka ugu badan ee carruurta loogu talagalay nooca sonkorowga labadiisa nooc waa 1.8mg maalin kasta, halka qiyaasta dayactirku ay u dhexeyso 0.6mg illaa 1.8mg maalintii.
Daawada loo yaqaan 'liraglutide' sidoo kale carruurta ayaa loo qori karaa inay ka caawiso daaweynta xaaladaha caafimaad ee kala duwan sida dhibaatooyinka kalyaha iyo beerka. Si kastaba ha noqotee, markaad daaweyneyso labadan xaaladood, waa inaad si taxaddar leh u qaadataa Liglutide maxaa yeelay waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo daran marka aad ka badato. Ma jiro wax isku-hagaajin ah oo lagula tacaali karo goorta loo qaadanayo daawada loo yaqaan 'liraglutide peptide' ee arrimaha beerka ama arrimaha kalyaha. Markaad qaadaneyso qiyaasta daawada liraglutide, yaree wax qaadashada insulin - ta si aad u yareyso halista hypoglycemia.
Maxaa dhacaya haddii aan dhaafo?
Ka badinta daroogo kasta ma ahan fikrad wanaagsan mana aha in lagu dhiirrigeliyo xitaa goorta a Qiyaasta Liraglutide ee miisaanka oo yaraada ama daaweynta xaalad kasta oo caafimaad. Waxaa lagugula talinayaa inaad markasta ku dhejiso tilmaamaha qiyaasta daawada ee uu dhakhtarkaagu ku siiyo. Khamri qaadashada waxay kuu horseedi doontaa waxyeelo daran, taasoo laga yaabo inay uga sii dari karto xaaladaada caafimaad ama xitaa u horseedi karto dhibaatooyin kale oo caafimaad. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood, cabitaanka xad dhaafka ah ayaa ka dhalan kara shil ama jawaab celinta jirkaaga daawada. Waxyeelooyinka ugu badan ee ay dadku is dhaafsadaan waxaa ka mid ah lallabo daran iyo matag. Markaad dareento inaad qaadatay qiyaas ka badan inta lagugula taliyay, raadso daryeel caafimaad sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa dhaqtarkaaga si lagaaga caawiyo.
Sanadihii la soo dhaafay, Liraglutide wuxuu cadeeyay inuu bixiyo faa'iidooyin kala duwan, gaar ahaan adduunka caafimaadka. Si kastaba ha noqotee, waxaad kaliya la kulmi kartaa ugu badnaan faa'iidooyinka liraglutide, haddii aad ku dhejiso tilmaamaha qiyaasta daawada iyo cunnooyinka saxda ah ama jimicsiga sida uu dhaqtarkaagu kugula taliyay. Waa kuwan qaar ka mid ah waxtarka ugu caansan ee loo yaqaan 'Liraglutide'.
Waxay kobcisaa nooca Sonkorowga 2
Magaca Liraglutide astaanta ah ee 'Victoza' waxaa adeegsaday oo oggolaaday FDA-da daaweynta sonkorowga nooca '2'. Daawada waxay ka caawineysaa xakameynta sonkorta dhiigga ee jirkaaga. Marka heerarka sonkorta ee jirkaaga ku jiraan, liraglutide waxay kicisaa xameetidaada si ay u soosaarto insulin badan oo insulin ah taasoo ka caawineysa ka takhalusidda gulukoosta dhiigga.
Caawinta la dagaalanka cayilka iyo culeyska jirka
Wadanka Mareeykanka, FDA waxay ogolaatay Liraglutide daaweynta daweynta buurnaanta kadib markii ay cadeysay inay wax ku ool tahay xakamaynta rabitaanka cuntada iyo qaadashada kalooriyeyaasha taasoo gacan ka geysatay maareynta miisaanka jirka. Celcelis ahaan, haweenku waxay la kulmeen hoos u dhac aad u weyn markii ay miisaanka lumiyaan marka loo eego ragga. Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan in ragga aysan ka faa'iideysan doonin dawadan. Si aad u hesho waayo-aragnimo miisaan lumis oo fiican oo daroogadaan ah, cunto habboon iyo jimicsi waa in sidoo kale lagu daraa qiyaasta.
Waxay ilaalisaa nidaamka wadnaha
Daawada loo yaqaan 'liraglutide' waxay caddeysay inay muhiim utahay ilaalinta muruqyada wadnahaaga iyo yareynta halista cudurada wadnaha. Daraasadaha caafimaad sidoo kale waxay muujinayaan in qaadashada daawada loo yaqaan 'liraglutide', cudurada wadnaha oo la wanaajiyey taasoo ka dhalatay nooca 2 diabetes mellitus iyo cayilka. Daawadu waxay kaloo kaa caawineysaa isku dheellitirka dhiiggaaga, kaasoo gacan ka geysanaya kor u qaadista caafimaadkaaga vascular.
Daawadan ayaa sidoo kale la sheegay inay saameyn wanaagsan ku yeelaneyso hagaajinta caafimaadka maskaxdaada, gacan ka geysaneyso xakameynta walaaca, waxayna u adeegi kartaa ka hortaga jirka iyo kahortaga caabuqa. Daraasad kale oo caafimaad, liraglutide waxay muujisay inay ka caawin karto dadka balwadda leh khamriga. Si kastaba ha noqotee qiyaasta xad dhaafka ah ee liraglutide waxay kuu horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo waxay burburin karaan dhammaan faa'iidooyinka laga filayo.
Ku dhawaad ​​daroogo kasta, markii si khaldan loo isticmaalo ama si xad-dhaaf ah loo isticmaalo waxay kuu geyn kartaa waxyeelo daran, iyo liraglutide ma aha mid gaar ah. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waxyeellooyinka ayaa sababi kara sida jirkaagu uga jawaabo qiyaasta luminta liraglutide. Qaar digniinta liraglutide waa wax caadi ah oo waqti lumiya, laakiin haddii ay dhacdo in saamayntan soo socota aan waqtigeeda la dhammaan ama ay aad u daran yihiin, raadso daryeel caafimaad;
San duuf leh, qufac ama hindhiso
Madax xanuun daran
Gubashada ama kaadida oo ku adkaata
Goobaha duritaanka ee Liraglutide waxaa laga yaabaa inay soo baxdo finanka
Calool istaag iyo wadne xanuun
Waxaa jira digniino aad u daran oo ah kuwa loo yaqaan 'liraglutide' oo u baahan daryeel caafimaad oo deg deg ah isla marka aad bilowdo inaad la kulanto, waxaana ka mid ah;
Maqaarka jaalaha ama indhaha
Haddaad bilowdo inaad ka fikirto dil, naftaada wax yeelo ama kuwa kale
Lalabbo, cuno barar, carrab, wajiga, indhaha ama afka.
Way ku adag tahay wax liqidda ama neefsashada.
Kuwaas oo dhab ah Dhibaatooyinka daawada Liraglutide, waxaa lagugula talinayaa inaad joojisid qaadashada qaadashooyinka isla marka aad raadineysid gargaar caafimaad.
Isdhexgalka daroogada ayaa saameyn ku yeelan kara sida dawadaadu u shaqeyn doonto ama xitaa kuu gelin doonta halis sare oo ah inaad la kulanto waxyeelooyin daran. Sidaa daraadeed, ka hor intaadan bilaabin qaadashada daawada Liraglutide, waxaa muhiim ah inaad u sheegtid takhtarkaaga wixii xaalad caafimaad kale ah ee aad kujirto daawada. Daawooyinka qaar ma wada shaqeyn karaan, waana u fiican tahay dhakhtarkaagu inuu ka warqabo dawooyinka kale ee aad qaadanaysid. Si aad u ahaato dhinaca nabdoon, ha bilaabin, beddelkeeda qiyaasta ama ha joojin qaadashada dawooyin adigoon la tashan xirfadle caafimaad.
Waxaa lagugula talinayaa inaadan dawadan qaadin daawo kale oo ay kujirto Liraglutide maxaa yeelay waxay kuu horseedi kartaa xad-dhaaf xad-dhaaf waxayna kuu horseedi kartaa waxyeelo daran. Waxay kuxirantahay xaaladaada caafimaad, dhakhtarkaaga ayaa ku siin doona xaq Is-dhexgalka Liraglutide si kor loogu qaado natiijooyinka. Waxaa jira daawooyin badan oo aad ka qaadan karto Liraglutide sida acetohexamide, albuterol, cinoxacin iyo danazol, iyo kuwo kale oo badan.
Sida laga soo xigtay dib u eegista liraglutide Nidaamyada kala duwan ee internetka, adeegsadayaal badan ayaa ku qanacsan natiijooyinka iyo faa'iidooyinka ay ku raaxeysteen markii ama ka dib markii ay qaateen daroogada. Daraasadaha caafimaad sidoo kale waxay muujinayaan sida dawadu ay waxtar ugu lahayd daaweynta xaaladaha caafimaad ee kala duwan sida buurnida, nooca 2 diabetes mellitus, dhibaatooyinka kalyaha iyo ka hortagga cudurada wadnaha ee ka dhasha xaaladaha caafimaad ee kaladuwan. Isdhexgalka liraglutide-ka ayaa sidoo kale cadeeyay inuu awood u leeyahay daweynta nooca sonkorowga ee loo yaqaan '2' ee carruurta ugu yaraan toban sano jir ah.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa khibrad xun ka leh daroogadaan, laakiin waxaa loo aanayn karaa Liraglutide overdose ama dulqaadashada jirka. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in waxyeelada liraglutide-ka dib loo rogi karo haddii aad la xiriirto dhaqtarkaaga waqti fiican. Sida ugu wanaagsan ee looga hortago la kulanka waxyeelada daran inta aad qaadaneyso dawadan waa baaritaan caafimaad kahor intaadan bilaabin qaadashadaada iyo u ogolaaneyso daawada inay kuu dejiso qiyaasta kugu habboon. Waxa kale oo lagu talinayaa inaad raacdo tilmaamaha qaadashada oo aad u sheegto dhakhtarkaaga wixii ku saabsan dawooyinka kale ee aad qaadato.
Dawadani waxay cadeysay inay lagama maarmaan u tahay caafimaadka adduunka sidaa darteed daaweynta buurnaanta, nooca sonkorowga 2 iyo dhibaatooyinka wadnaha, iyo kuwa kale. Budada Liraglutide (204656-20-2) Iibka waxaa laga heli karaa dukaamada internetka ee kala duwan, laakiin waxaad ka heli doontaa magacyo kala duwan oo magac ah sida Saxenda iyo Victoza. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad fahanto waxa astaan ​​kasta loo istcimaalo ka hor intaadan dalban amarkaaga. Sida aan kor ku soo sheegnay, magac kasta oo loo yaqaan 'liraglutide brand' waxaa loo isticmaalaa ujeedo gaar ah. Saxenda waxaa loo oggol yahay miisaanka oo yaraada iyo daweynta buurnaanta halka Victoza loo isticmaalo nooca daaweynta sonkorowga 2 iyo sidoo kale cudurada wadnaha ee ka yimaada heerarka sonkorta dhiigga ee sareysa. Si kastaba ha noqotee, raac tilmaamaha qiyaasta daawada si aad uga fogaato inaad la kulanto waxyeelada Liraglutide.
Waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso cilmi baaris sax ah oo ku saabsan liraglutide iibsato isha intaadan iibsan. Maanta waxaa jira iibiyayaal badan oo peptide ah oo suuqa iibiya, taasoo adkeyneysa inaad ogaato halka laga helo daawo tayo leh oo kuu dammaanad qaadi doonta natiijooyin cajiib ah. Fiiri dib u eegista liraglutide-ka ee websaydhaha iibiyaha si aad u hesho dulmar guud ee alaabada iyo sida iibiyaha u shaqeeyo. Xulashada iibiyaha liraglutide ee ugu khibradda iyo sumcadda leh wuxuu kuu xaqiijin doonaa adeegyo tayo leh iyo sidoo kale badeecado caafimaad oo tayo leh. Qiimaha Liraglutide wuxuu ku kala duwanyahay hal iibgeeye mid kale.
Ma aha inaad ka walwasho wax uun markaad qaadatid Liraglutide maadaama ay tahay daawo sharci ah oo natiijooyinka ka wanaagsan, ku soo dar dawadaada meertada qiyaasta oo dhan.
Kaakeh, Y., Kanjee, S., Boone, K., & Sutton, J. (2012). Liraglutide injury waxaa soo gaadhay dhaawac kelyaha oo daran. Farmashiyaha: joornaalka cilmiga dawooyinka ee dawooyinka iyo dawooyinka, 32(1), e7-e11.
Marso, SP, Daniels, GH, Brown-Frandsen, K., Kristensen, P., Mann, JF, Nauck, MA,… & Steinberg, WM (2016). Liraglutide iyo natiijooyinka wadnaha ee nooca sonkorowga 2. New England Journal of Medicine, 375(4), 311-322.
Lind, M., Hirsch, IB, Tuomilehto, J., Dahlqvist, S., Ahrén, B., Torffvit, O.,… & Sjöberg, S. (2015). Liraglutide ee dadka lagu daaweeyay nooca sonkorowga '2' oo leh duritaanno badan oo insulin maalinle ah: tijaabada kiliinikada ee la kala soocayo (MDI Liraglutide test). Bmj, 351, h5364.
Davies, MJ, Bergenstal, R., Bode, B., Kushner, RF, Lewin, A., Skjøth, TV,… & DeFronzo, RA (2015). Waxtarka liraglutide ee miisaanka oo yaraada dadka bukaanka ah ee qaba sonkorowga nooca loo yaqaan '2 type': sonkorowga loo yaqaan '' SCALE diabetes ') ayaa tijaabiyey xarun caafimaad. Jaamac, 314(7), 687-699.